အွန်​လိုင်း​ပေါ်က လိမ်​လည်​မှုများ (အပိုင်း ၂ )
ဖြစ်​ရပ်​ ၅ လူ​တွေက ခက်သည်​ Online ​ပေါ်မှာ အများအထင်​​သေးမခံရနိုင်​ဖို့အတွက်​ ရှိသမျှအထုတ်​အကုန်​​ဖြည်​ပြသည်​ အချို့သူ​တွေစိတ်​ထဲမှာ နိုင်​ငံခြားသာတစ်​​ယောက်​နဲ့ အ​ပေါင်းအသင်းဖြစ်​ရင်​ ​ပြောနိုင်​ဆိုနိုင်​ရင်​ အခြားသူ အထင်​ကြီးမယ်​ ထင်​ကြသည်​ .... ​​နောက်တစ်​မျိုးက ​လောဘ နဲ့ ယုံလွယ်​စိတ်​ မြန်မာပြည်မှာ ​​ဖားခုန်​စနစ်​ဖြင့်​တိုးတက်​လာ​သော နည်းပညာများနှင့်​အတူပါလာ​သော လိမ်​လည်​နည်းများကို မသိသမှု ဒီအချက်​​တွေကိုအခွင့်​ကောင်းယူပြီး မသမာသူက SocialNetwork ​ပေါ်မှာ သား​ကောင်​ရှာ​ဖွေကြသည်​ ပထမဆုံး Social Media ​ပေါ်မှာ နိုင်​ငံခြားသားလုပ်​ငန်းရှင်​တစ်​​ယောက်​ပုံစံ ဒါမှမဟုတ်​ ချမ်းသာတဲ့ပုံစံ အသွင်​ယူပါတယ်​. ဘယ်​လိုအသွင်​ယူနိုင်​သလဲ မြန်​မာနိုင်​ငံမှ လူများသည်​ FB ​မှလွဲပြီး ကျန်​တဲ့ Social Network ကိုအသုံးပြုတာနည်းပါးပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ Twitter Linkedin လို​နေရာမျိုးက​နေ မြန်​မာပြည်​ကလူ​တွေ အထင်​ကြီး​စေ​လောက်​တဲ့ လူတစ်​​ယောက်​ရဲ့ Profile ကို ယူပြီး အ​ကောင့်​တစ်​ခုဖန်​တီးလိုက်​ပါတယ် အ​ပေါ်မှာ​ဖော်​ပြခဲ့တဲ့ အားနည်းချက်​​တွေနဲ့ ကိုက်​ညီတဲ့ လူ​တွေကို​ရွေးချယ်​ပြီး Frien
အွန်​လိုင်း​ပေါ်က လိမ်​လည်​မှုများ (အပိုင်း ၁ )
ဖြစ်​ရပ်​ ၁ မဲ​​လေလံလုပ်​ကြရင်​ မဲလုပ်​တာ ဥပမာ ၁၀ ဦးရှိရင်​ အပြင်​မှာလဲ တစ်​တယ်​သိတာ ၁၀ ဦးထဲက ၅ ဦးကို သိရင်​​တောင်​​တော်​​တော်​များ​နေပြီး ဒိုင်​ဖြစ်​တဲ့ A က​နေ အပြင်မှာလဲသိ Social Media မှာလဲ သူငယ်​ချင်းဖြစ်​တဲ့ B C D E ကို မဲစုကြမယ်​ ဘယ်​​လောက်​ထည့်​ရင်​ တစ်​ပတ်​ကို တစ်​လကို ဘယ်​​လောက်​ပြန်​ရမယ်​ ယုံကြည်​ရတဲ သူငယ်​ချင်းရှိရင်​ပါလို့ရတယ်​ဆိုပြီး မဲ​​ကြေးစစုပါတယ်​ ခင်​မင်​တဲ့သူ​တွေက​နေ အဆင့်​ဆင့်​​ပါလိုက်​တာ ၁၀ ဦး ၁၅ ဦးဖြစ်​လာ​ရော .. အရင်​ဆုံးဒိုင်​ဖြစ်​တဲ့သူ A က​နေ FB Group ​ထောင်တာလဲရှိမယ်​ Viber ဒါမှမဟုတ်​ Mesenger မှာ Group ဖွဲ့တာလဲရှိမယ်​ ဒါမှမဟုတ်​ မဲမှာပါတဲ့သူ အချင်းချင်း Friend အပြန်​အလှန်​အပ်​ကြတာရှိမယ်​ ပထမဆုံး မဲ​ကြေးကို​တော့ ဒိုင်​ဖြစ်​တဲ့သူ A က ယူမယ်​ ​မဲ​ကြေးကာလအလိုက်​ တစ်​ပတ်​ သို့မဟုတ်​ တစ်​လ ပထမဆုံးအကြိမ်​ဆို​တော့ အားလုံက အကုန်​ထည့်​တယ်​ မဲ​ကြေးမှာပါတဲ့သူ​တွေဆီက ​ငွေလဲအားလုံးရ​​ရော ဒိုင်​က ​ပြေးပါ​လေ​ရော ... အဲဒီမှာတင်​ အချငိးချင်း​ပြောထားတဲ့ Chat record ​တွေ Phone Record ​တွေနဲ့တိုင်​ကြ​ တရားစွဲကြပါ​ရော ဒိုင်​ဖြစ်​တဲ့ A က မ​ပြေးပဲ အဖမ်းခံမယ
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) နှင့် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄(ဃ)
cyber bullying ကိစ္စတော်တော်များများမှာ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) နှင့် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄(ဃ) နှစ်ခုလုံးနဲ့ တရားစွဲနိုင်ပါတယ် လောလောဆယ် တရားစွဲတာ အများဆုံးက ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) နဲ့ပဲတရားစွဲတာများပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄(ဃ) ကတော့ 66 ထက်စာရင် ထောင်ဒဏ် ငွေဒဏ်ပိုမိုများပြားပါတယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက် လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာ ၆၆(ဃ) နဲ့ပဲ တရားစွဲဆိုကြပြီး ချမှတ်တဲ့ စီရင်ထုံး အရ ပြစ်ဒဏ် ကလဲ ၆လ ထက်မပိုတာကို သွားတွေ့နေရပါတယ်။ အဲတော့နောက်လူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်း ရှေ့က စီရင်ထုံးတွေအရ ၆ လ လောက်ပဲ ကျဖို့များပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်သက်သေခံ ဆိုတာ Information ကို သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Device မှန်သမျှ ဒစ်ဂျစ်တယ်သက်သေခံ ဖြစ်ပါတယ် ယာယီသိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Device တွေလဲပါဝင်ပါတယ်။ Eg RAM အီလက်ထရောနစ်သက်သေခံချက်ဆိုတာကတော့ အချက်အလက်တွေကို ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိတဲ့ Device မှန်သမျှဟာ အီလက်ထရောနစ်သက်သေခံ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းမရှိပါဘူး ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) "ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ခြောက်လှန့်ခြင်း တောင်းယူခြင်း ၊သေ
Digital Forensics လုပျငနျးဆိုတာဘာလဲ Digital Evidence မှာဘယျအခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့စုံရမလဲ စဈဆေးသူတှေ ဘယျလိုစဈဆေးကွလဲ
Digital Forensics ဆိုသည်မှာ Electronic Device Electronic Media ​တွေက​နေ​ပေးပို့တဲ့အချက်​အလက်​​တွေ နဲ့ Electronic Device Electronic Media ​တွေထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ အချက်​အလက်​​တွေကို ပြန်​လှန်​ရှာ​ဖွေခြင်း စစ်​​ဆေးခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​ Digital Evidence ဆိုတာက​တော့ အထက်​ပါ Electronic Device Electronic Media ​တွေကို စစ်​​ဆေးရာမှာ ရရှိလာတဲ့ သက်​​သေခံအချက်​အလက်​​တွေဟာ အများယုံကြည်​လက်​ခံနိုင်​တဲ့အ​နေအထားရှိခြင်း- မှန်​ကန်​မှုရှိခြင်းတို့နဲ့ပြည့်​စုံပြီး ရလာတဲ့ သက်​​သေခံချက်က ​ဥပ​ဒေအရလဲ သက်​​သေခံတင်​သွင်းနိုင်​ရပါမယ်​ နိုင်​ငံ​တွေ မှာပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပ​ဒေအရ အဖွဲ့အစည်း​တွေအရ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိ​ပေမဲ့ Over All Process အရ တူညီတဲ့အချက်​​တွေ လုပ်​​ဆောင်​ရမဲ့အချက်​အလက်​​တွေက​တော့ တူညီပါတယ်​ ပထမဆုံးအပိုင်းက​တော့ ​First Responder Team က​နေအပ်​နှံတဲ့ သက်​​သေခံ Device နဲ့ အချက်​အလက်​​တွေကို လက်​ခံခြင်းအပိုင်း (အဖွဲ့အစည်အလိုက်​ပုံစံ ​တွေ ဖြည့်​စွက်​ရမဲ့ အချက်​အလက်​​တွေ ကွဲပြားပါတယ်​) လုပ်​ငန်းခွဲ​ဝေခြင်း ​​ရောက်​ရှိလာတဲ့ အမှုအ​နေအထား Device အ​နေအထား အရ စစ်​​ဆေးမည့်​
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ) နှင့် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ...
Digital Forensics လုပျငနျးဆိုတာဘာလဲ Digital Eviden...
User တဈယောကျက Tor Browser အသုံးပွုမယျဆိုရငျ